Ovaritis (သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Ovaritis (သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ)
Ovaritis (သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
Ovaritis ဟာ သားဥအိမ်ရောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး သားဥအိမ်မှာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ရောင်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သားဥအိမ် တစ်ခုတည်းရောင်ခြင်းဟာ အဖြစ်နည်းပါတယ်။
အခြားရောင်ရမ်းခြင်းတွေလိုပဲ သားဥအိမ်ရောင်ခြင်းဟာ ရုတ်တရက် (သို့) နာတာရှည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ subacute ရောင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ သားဥအိမ် နာတာရှည်ရောင်ခြင်းမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သားအိမ်နဲ့ သားဥအိမ်ရောင်ခြင်းဟာ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို ပျောက်ဆုံးစေနိုင်ပါတယ်။
Ovaritis(သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ) ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Ovaritis ဟာ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Ovaritis (သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ)ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ပုံမှန်အခြေအနေမှာ တကယ်လို့ လူနာဟာ ရုတ်တရက်သားဥအိမ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဖျားနာခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အခြားလက္ခဏာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ နာတာရှည် အခြေအနေတွေမှာတော့ ယေဘုယျအားနည်းခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေနဲ့ ရာသီမမှန်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တင်ပါးဆုံပိုင်းရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်ထွက်ခြင်း များလာပြီး ဒါဟာ သုက်ပိုးတွေ အသက်ရှင်နိုင်စွမ်းနဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ Fallopian tube ပိတ်ခြင်းနဲ့ hydrosalpinx တွေမှာ သုက်ပိုးတွေဟာ မျိုးဥနဲ့ အောင်မြင်စွာ တွေ့နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။
သားဥအိမ်မှာ ကပ်ညိခြင်းတွေဟာ သားဥကြွေခြင်းကို ခက်ခဲစေပြီး fallopian tubes တွေဟာ သားဥတွေကို မကောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ သားဥအိမ် လုပ်ငန်းဆောင်တာ ပျက်စီးတာကြောင့် သားဥမကြွေခြင်း၊ ရာသီမလာခြင်း အစရှိတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေဟာ ကလေးမရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေက Ovaritis(သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ) ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
သားဥအိမ်ရောင်ခြင်းဟာ အဓိကအားဖြင့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးတွေကတော့ opportunistic (staphylococcus, streptococcus, E. coli, Mycoplasma) သို့ pathogens (Chlamydia, spirochetes, viruses) တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါတွေဟာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့တာကြောင့် သားဥအိမ်နဲ့ fallopian tubes ရောင်ခြင်းဟာ ဒီရောဂါပိုးတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။
သားအိမ်မရောင်ပဲ သားဥအိမ်ရောင်ခြင်းဟာ အလွန်ရှားပါးပါတယ်။ သားဥအိမ်တစ်ရှူးတွေ ရောင်ခြင်းရဲ့ အဓိက နေရာဟာ ရောင်နေတဲ့ fallopian tubes တွေရဲ့ ဘေးဖြစ်ပါတယ်။ Fallopian tubes တွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓါထဲမှာ ရှိစဉ် ပိုးကင်းစင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ တောက်လျှောက်ဖြစ်ပွားပြီး မိန်းမကိုယ်၊ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ သားအိမ်တွေအထိ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
Tubes တွေ၊ ပြီးတော့ သားဥအိမ်တွေမှာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း စတင်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ appendages တွေဟာ ရောဂါပိုးကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ appendages တွေ ရောင်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးမကောင်းပဲ ကိုယ်ခံအားနည်းနေတဲ့ လူနာတွေမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလူနာတွေမှာ endocrine နဲ့ ကိုယ်ခံအားရောဂါများ၊ ဟော်မုန်း ပုံမမှန်ခြင်းများ၊ အောက်ခံ မိန်းမရောဂါရှိသူများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Ovaritis(သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Ovaritis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ကုသမှု၊ ကလေးပျက်ကျခြင်း၊ ကလေးမွေးခြင်းတွေကြောင့် လိင်အင်္ဂါတွေ၊ သားအိမ်မှာ တစ်ရှူးပျက်စီးခြင်း။ ရောဂါပိုးတွေဟာ mucosa ကိုဖေါက်ပြီး အောက်ခံတစ်ရှူးတွေထဲ ဝင်ကာ ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ tubes ကနေ တစ်ဆင့် သားအိမ်ထဲ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးတွေဟာ လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်းထဲကို ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေ တစ်ဆင့်လည်း ဝင်နိုင်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါရောင်ရမ်းခြင်း – ကာလသားရောဂါဟာ အပြင်ဘက် လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်းကဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပြီး အပေါ်ပိုင်းကို ပြန့်သွားစေပါတယ်။ ကာလသားရောဂါကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်းမှာ လျင်မြန်စွာ ပြန့်ပွားပြီး appendages တွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သားအိမ် နာတာရှည်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ ရှိခြင်း – နာတာရှည်သားအိမ်ရောင်ခြင်းဟာ ရောဂါပိုးတွေကို fallopian tubes တစ်လျှောက်ကို တက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
Uterine spiral – မိန်းမကိုယ် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ သားအိမ်၊ tubes တွေနဲ့ သားဥအိမ်ကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓါ အပူချိန်နည်းခြင်း၊ ရာသီဥတု ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်း
Ovaritis(သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ) ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
သားဥအိမ်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ ရောဂါရဲ့ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း၊ အဆင့်နဲ့ ပတ်ပတ်လည်က နေရာတွေမှာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အခြေအနေ အတော်များများမှာ သားဥအိမ် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ fallopian tubes တွေရောင်တဲ့အခါ သားအိမ်ရောင်ခြင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
သားအိမ်ရောင်ခြင်းကိုသိရှိဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ ရောဂါရှာတွေ့ခြင်းဟာ လူနာတွေရဲ့ လက္ခဏာတွေ၊ လိင်အင်္ဂါ စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုတွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ Ultrasound ဟာ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပြန့်ပွားမှုတွေကို သိရှိဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Ovaritis (သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ)ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
ကုသမှုရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ကို ပျောက်င်းအောင်ကုသဖို့၊ ဟော်မုန်း ပုံမမှန်မှုတွေနဲ့ ကိုယ်ခံအားပြောင်းလဲမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို သက်သာအောင် ကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကုသမှုရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကလေးရနိုင်ခြေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Ovaritis(သားဥအိမ်ရောင်ရောဂါ) ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Ovaritis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘဝနေထိုင်မှု ပြောင်းလဲခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုစိုက်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. Do You Know What Ovaritis Symptoms Are? http://www.sooperarticles.com/health-fitness-articles/men-health-articles/do-you-know-what-ovaritis-symptoms-1456719.html. Accessed 29 Dec 2016
2. Ovaritis. http://diets-doctor.com/en/pages/852054. Accessed 29 Dec 2016
3. Inflammation of the Ovary or Ovaritis. http://www.homemedicine.ca/HomeRemedies/Inflammation-Of-The-Ovary-Or-Ova.html. Accessed 29 Dec 2016